Ongoti bathi sekuphelile ngeChiefs - Ilanga News
Home Ezemidlalo Ongoti bathi sekuphelile ngeChiefs
Ongoti bathi sekuphelile ngeChiefs
Babona abadlali beziMpofana sebephelelwe wukuzethemba
SENZO SOKHELA NOMZWAMANDLA ZONDI
IZINKAKHA ezihlonishwayo ebholeni lakuleli zibona selidume layithatha iKaizer Chiefs kwi-MTN8.
IChiefs izokwamukela omkhaya i-Orlando Pirates emlenzeni wesibili kwi-semi final yeMTN8 ngeSonto ngo-15h00 eFNB Stadium, eSoweto.
IBucs iya kulo mdlalo nje, isilufakile unyawo olulodwa kowamanqamu njengoba inenebule iChiefs ngo-3-0 emlenzeni wokuqala obungeledlule e-Orlando Stadium, eSoweto.
IPirates ivule isikole sebhola kulo mdlalo njengoba idlale ibhola eliseqophelweni eliphezulu.
Izinkakha ezihlonishwayo ebholeni lakuleli zithi iChiefs selidume layithatha, yize isenalo ithuba lokuphendula amatafula.
UMlungisi “Prof” Ngubane odume edlala kwiBush Bucks ngeminyaka yo-80, obuye abe ngumqeqeshi uthe: “Ukube iChiefs inabadlali abaseqophelweni eliphezulu bengizothi isazobuya kulo mdlalo kodwa ngoba ayinabo ngeke ilibone elidlalayo.
“Abadlali enabo abakhombisi ukuthi basenawo amandla angayisa le kilabhu phambili.
“Thina ngo-1987 sabuya kwiPirates ngisakwiBush Bucks ngoba sasinabadlali abaseqophelweni eliphezulu.
“Ngiyafisa ukuthi abalandeli nabaphathi beChiefs bangamufakeli ingcindezi umqeqeshi uGavin Hunt ngoba akalitholanga ithuba lokuzisayinisela abadlali bakhe njengoba belahlwe yileli cala le-Fifa.
“Kusazoba nzima kwiChiefs, laba badlali enabo ngeke besayisiza ngalutho,’’ kusho uNgubane.
Uqhube ngokuthi nabaphathi bale kilabhu kufanele bazinuke kwabona amakhwapha.
“Into ebulala iChiefs wukuthi noma inalo ilungelo lokusayinisa ayithengi, ilinda umdlali aze aphelelwe yinkontileka nekilabhu yakhe bese imlanda.
“Ngeke uzwe kuthiwa iChiefs ikhiphe u-R7-million ithenga umdlali. Ake kuthi uma isivumelekile ukusayinisa abadlali sizwe kuthiwa ifuna uFortune Makaringe imthenge.
“Abantu bangakhala ngeMamelodi Sundowns bathi ibulala ibhola ngokuthenga abadlali ngemali enkulu iphinde ibaholele izindodla zemali ngokwami yenza kahle.
“Uma umdlali ehola u-R400 000 kuleli uzobe esayaphi koBelgium ngoba kunabadlali abangayiholi leyo mali kula mazwe amancane ase-Europe, abafike laphaya bahole o-R20 000 laba ababathola lana ekhaya, yingakho beshesha ukubuya.
“Ko-Egypt nakoTunisia abadlali bakhona abaphumaphumi ngoba iningi imali kula mazwe.
“IChiefs kuzofanele iyishintshe le nto yayo yokusaba nemali uma ifuna ukubuyisa isithunzi sayo,’’ kusho uNgubane.
UKhabo Zondo ongomunye wabaqeqeshi abahlonishwayo kuleli uthi kuzoba nzima.
“Okumqoka okufanele iChiefs ikwenze wukushaya igoli ngokushesha okuzokwenza iPirates itatazele bese yenza amaphutha.
“Kodwa uma iPirates ike yalishaya kuqala igoli kuyobe sekuphelile ngeChiefs.
“Umbuzo omkhulu wukuthi iChiefs inabo yini abadlali abangaphendula amatafula? Ngendlela okubukeka ngayo isenkingeni, mancane amathuba okuthi ingabuya,’’ kusho uZondo.
UNeil Tovey oyinkakha ehlonishwayo kuleli oke wadlala kuyona iChiefs, uthe: “Uma iPirates izoya kulo mdlalo ngenhloso yokuyopaka ibhasi izoba senkingeni. Kodwa-ke angiyiboni yenza njalo izofuna ukuhlohla amagoli amaningi nakulo mdlalo njengoba iChiefs isesimweni esingesihle.
“Inkinga enkulu wukuthi abadlali beChiefs baphelelwe wukuzethemba. Kubukeka iPirates isidlulele kowamanqamu,’’ kusho uTovey.
* Kwenye i-semi final, iBloemfontein Celtic izodlala neSuperSport United ngo-Mgqibelo ngo-15h00 eSeisa Ramabodu Stadium, eBloemfontein. Emlenzeni wokuqala la makilabhu adlala ngokulingana kuba ngu-1-1.
Previous articleUhlawulisiwe okamaskandi “we-video yocansi”
Next article‘Udlwengule indodakazi wayimithisa’